Banyere Anyị - Qingdao Yi Xinyan International Trade Co., Ltd.
Ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na nnabata na mmanu
Shining Industry China, anyị nwere ụlọ ọrụ atọ iji nye ọrụ kacha mma.
Anyị na-eme amị na griiz anụ ụlọ karịa afọ 20.
Iji weta ngwaahịa kachasị mma n'ụwa bụ nzube nke ịchụso anyị. Anyị guzobere ahia ụlọ ọrụ mbupụ isi ngwaahịa griiz na amị na Qingdao Port.
Qingdao YIXINYAN ahia mba ofesi co., Ltd the brand BXY, Isi ngwaahịa bụ ohiri isi ngọngọ amị, ọzọ ika SKYN, isi ngwaahịa bụ mmanu mmanu.Qingdao QINGHENG amị co., Ltd na ika QHW, isi ngwaahịa bụ bọl biarin na ala biarin.Qingdao SENZEXIANG mba ahia ahia., Ltd the brand SZX , isi ngwaahịa bụ insulator.
Anyị ụlọ ọrụ setịpụrụ nnyocha na mmepe, imewe, mmepụta dị ka otu n'ime elu tech enterprise, ike oru ike. The ụlọ ọrụ nwere zuru ezu na-amị pụrụ iche ule akụrụngwa, CNC egweri igwe, elu kpọmkwem nkenke maka ngwaahịa na-elu nkenke na dina a siri ike ntọala.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso àgwà nke mgbọrọgwụ, ebumnuche azụmahịa na-adabere na ya, maka ọtụtụ ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi iji nye ngwaahịa dị mma, ụdị ndị a ma ama iji mepụta ụlọ ọrụ mmanu mmanu. Anyị ji obi anyị na-anabata ụlọ na ndị mba ọzọ na-azụ ahịa na-atụle imekọ ihe ọnụ na nkịtị mmepe.
Ngwaahịa m na-ere na-ewu ewu na mba 20, gụnyere Europe, America, Africa, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ.
Ugbu a ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụ isi ngwaahịa nwere ike kama ịdị oke nkenke, ibu mbupụ ibu mbupụ. Anyị factory na Liao Cheng City, niile agba àgwà na ike dị na ISO9001 quality usoro management, otu n'ime ndị isi mba ọzọ ahia mbupụ ụlọ ọrụ. Ugbu a, anyị nwere ike inye Pillow Block Iburu, Deep uzo Ball agba, Spherical ala agba, Tapered ala agba, Cylindrical ala agba, Nkwanye Ball agba na ngwaahịa ndị ọzọ nke mmepụta na ngwa. Registeredlọ ọrụ aha ụghalaahia "BXY", "FXY", "QHW" "SKYN" nwere obere dochie mbubata ngwaahịa. The ngwaahịa na-ọtụtụ-eji na elu nkenke igwe, ígwè igwe, coal na Ngwuputa, eweli, mmanụ ubi, ifufe ike, akpakanamde, akwụkwọ na ndị ọzọ ọrụ, niile ọhụrụ m na ndị agadi ahịa nwere mmasị na anyị na ngwaahịa.
Anyị na-arụkwa ụdị ahịa griiz niile dị ka griiz calcium base, griiz lithium base, nnukwu mmanu mmanu mmanu na ihe ndi ozo. Ndị otu anyị niile, na-ejigide ndị ọrụ injinia ọkachamara nwere ahụmịhe bara ụba na mmepe ngwaahịa mmanụ, na-anwa ịchọta ụkpụrụ usoro nke esemokwu na arụ ọrụ na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ nke nsị nsị nsị nsị, na-achọ ịnye ndị ahịa ọkachamara ịmịpụta ngwaahịa na solutionshazi ihe ngwọta na inye ndị ahịa ihe karịrị ụlọ ọrụ 120 iji mee ka ngwa ndị ahịa ghara ịda mba na mmanụ!
Isi Asọmpi Uru
Anyị karịrị 10years nke ọkachamara ahụmahụ dị ka a emeputa nke mmanu griiz.
· Anyị na-eme ngwugwu dị ka gị imewe ma ọ bụ gị samples n'ụzọ zuru ezu.
· Anyị nwere nyocha siri ike na ndị otu na-emepe emepe iji dozie nsogbu griiz.
· Enwere ọtụtụ ndị na-ebunye ngwaahịa na gburugburu ụlọ ọrụ anyị, anyị kwadoro ọtụtụ afọ.
· Obere ikpe iwu nwere ike na-anabata, free sample dị.
· Anyị price bụ ihe ezi uche na na-na top àgwà ọ bụla ahịa.
· Ezigbo mma
· Ezi Aha
· Nabata obere ule
· Free Design Packaging
· Sample Dị
Ike nyocha na ikike
Nkọwapụta ndị agha
Resprụ Ọrụ Dịịrị Ya
Large Production ikike
Ndị Ọrụ Nwere Ahụmịhe
Nkwado Ogologo Oge
Anyị bụ ndị pụrụ iche banyere abụọ mmeri imekọ ihe ọnụ nzube, bụ nke mbụ nhọrọ, ị ịchịkwa uru anyị na-esi ọnwụ na àgwà, anyị bụ ndị gị tụkwasịrị obi soplaya, anyị mesiri ike na ọrụ, bụ nhọrọ mbụ maka ị dị njikere ogologo oge imekọ ihe ọnụ, ndi otu anyi nwere ochicho kachasi elu
anyị abụghị naanị onye anyị na ya na-azụkọ ahịa, anyị hụrụ nzukọ n'anya, yabụ na anyị nwere ibu ọrụ nke ịnọgide na-enwe ezi mmekọrịta. Anyị siri ọnwụ "Mee azụmaahịa dị mma, kpaa ọnụahịa na-agbanwe agbanwe."